Glide, codsi kahadal fiidiyow oo kaladuwan oo aad jeclaan doonto | Androidsis
Glide, codsi kahadal fiidiyow oo kaladuwan oo aad jeclaan doonto
Codsiyada warbaahinta bulshada ama fariimaha deg dega ah shaki kuma jiro in, "Waxaa jira wax bixin iyo qaadasho sida ay yiraahdaan", in kasta oo in yar oo ka mid ahi ay midho dhalaanba. Codsiga aan soo bandhigi doono ee aan maanta kugula talin doono, codsi la yiraahdo Glide, waa wax aad u wanaagsan kala duwan app chat video oo aan rajeynayo in, sida ku dhacday naftayda, aad u jeclaan doontid wax badan.
Sideen uga faalloodaa fiidiyowga inaan kaaga tagay kaliya khadadkaan, Glide waa isku dhafka ugu fiican iyo kan ugu xun, Sida ay indhaha u fiirinayaan! ee codsiyada fariimaha degdegga ah ku qor Telegram, WhatsApp ama Messenger, isku dar dhif ah oo ay la socdaan shaqooyinka ay noo fidiyaan codsiyada nooca warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter, Instagram ama xitaa Snapchat. Haddii aad rabto inaad ogaato wax kasta oo arintan dhifka ah laakiin gaarka ah ee soo jiidashada leh ee fiidiyowga ah ee loogu talagalay Android ay na siiso, marka laga reebo daawashada fiidiyowga aan horay u soo sheegay iyo inaan kaaga tagay bilowga qoraalkan, waxaan kugula talinayaa inaad gujiso ku sii wad akhriska qoraalkan maxaa yeelay marka laga reebo ka tagitaanka tooska ah ee lagu soo dejisto arjiga iyada oo loo marayo Google Play Store, waxaan sidoo kale ku siinayaa ra'yigayga ugu daacadsan ee ku saabsan wax kasta oo ay bixiso Glide Messenger & Video Chat.
Wax walba oo Glide Messenger & Video Chat ayaa na siiya
Glide waa a codsi fariin deg deg ah oo ku saleysan fariin toos ah oo fiidiyoow ah ama fiidiyoow deg deg ah, oo, haddii dadku si qoto dheer u ogaan lahaayeen, runtu tahay inay wax badan siin doonto laakiin ciyaaro badan shaki la'aanna waxay noqon doontaa guul weyn oo laga soo dejisto dalkeenna Spain.
Sideen kuu sheegaa, codsigan wuxuu ku saleysan yahay wada xiriirka u dhexeeya laba qof ama kabadan laakiin wuxuu diirada saaray farriimaha degdegga ah ee fiidiyowga oo si toos ah loogu dhejiyo daruuraha si aad ula wadaagto oo aadan u qaadin wax boos ah oo ku jira xusuusta terminaalkeena Android maaddaama aysan waxba ku kaydsanayn.
Tani waxay ka duwan tahay codsiyada kale sida WhatsApp ee keydiya wax kasta oo ku yaal bartayada 'Android' illaa inta gebi ahaanba laga wada dheregsan yahay, marka loo eego 'Glide' ma dhacdo tan iyo wax aan u dirno ama ku helno arjiga laguma keydin doono Android-keena, wax walba waxaa loo ilaalin doonaa si ammaan ah oo sifiican loogu qarin doonaa daruuraha sida ay ugu dhacdo codsiyada kale sida Telegram.
Waxa aan ugu jeclaa Glide, barnaamijkan cusub ee lagu sheekeysto fiidiyowga ee loogu talagalay Android, ayaa ah marka aan bilowno duubista fiidiyow si aan ugu dirno xiriir gaar ah, xiriiriyahan ayaa heli doona a ogeysiis deg deg ah in aan hawada ku jirno adoo duubaya fiidiyow taas ayaa si gaar ah loogu talagalay naftiisa.
Tani xiriirkeenu wuxuu go'aansan karaa inuu isku xirnaado xilligan si uu awood ugu yeesho iyo in kale toos u daawo baahinta aan kor kusoo sheegnay, ama liddi ku ah, u gudbi ogeysiiska iyo daawo Video-ga oo dib u dhacay waqtigii uu doonayay kaliya adoo galaya arjiga oo gujinaya ogeysiinta fariinta fiidiyowga cusub ee la helay.
Sababtaas darteed kaligey, waxaan horey ujeclahay Codsiga Glide-ka, in hadii ay jirto hal wax oo khaldan, ay tahay in qofna uusan ka ogeyn wadankeena inkasta oo ay in ka badan 10 milyan oo soo dejin firfircoon, taas oo caqabad weyn nagu noqon doonta si aan u tijaabino shaqooyinka uu na siinayo arjiga maadaama aan hubaal heli doonin cid aan la wadaageyno fiidiyowyadeena illaa aan ka door bidno casuumaada si aan u tijaabino arjiga xiriiradayada ugu dhow.
Ka dib shaqadan ugu weyn iyo taas oo ay mudan tahay in la tijaabiyo arjiga, waxaan sidoo kale haysannaa xulashooyin, sidee bay u noqon kartaa si kale, si loo awoodo sawir toos u dir iyadoo laga qaadayo kamaradda, ka soo dir sawir kasta sawirkeena Android, dir qoraalada codka degdega ah, iyo xitaa dir emoticons deg deg ah sidoo kale isla markiiba oo aanad ka tagin nooc kasta oo faylka haraaga ah oo ku saabsan Android, dhammaan daruuraha.
U dhaqaaqida qaybta ay ugu egtahay shabakad bulsheed, qeybta aniga shaqsiyan aanan xiiseyneynin gebi ahaanba arjiga, waxaan leenahay qeyb la yiraahdo «Baro Dadka», taas oo kaliya annaga oo ku darna gacanta, taas oo aanan sameyn, waxaan arki karnaa dadka isticmaala arjiga oo lagu sifeeyay da 'kala duwan oo ku jira kuweenna, iyo sidoo kale Dadkan la soo kordhiyay waxaa lagu muujiyay in lagu sifeeyo sida ay doorbidayaan jinsi ahaan, noo dhow ama markii ugu dambeysay ee firfircoon.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso Glide Messenger & Video Chat, waxyar ka hooseysa xariiqyadan waxaan kaaga tagayaa sanduuqa leh xiriirka tooska ah ee Google Play Store si toos ah loogu soo dejiyo arjiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Glide, codsi kahadal fiidiyow oo kaladuwan oo aad jeclaan doonto
DOOGEE waxay iibin doontaa 100 mobiles maalintii wax ka yar 10 euro
Khad khadka taleefanka oo bilaash ah, SMS bilaash ah, Internet bilaash ah iyo taleefan casri ah oo kaliya 59 euro !! Tan waxaa lagu gaari karaa oo keliya FreedomPop